INDLU YECONTAINER EYANDISIWEYO - UYILO LWENDLU
Eyona uyilo Lwendlu Indlu yeContainer eyandisiweyo
Indlu yeContainer eyandisiweyo
Apha sijonga indlu enesitayile eyandisiweyo yesikhongozeli exhotyiswe ngeepaneli zelanga ukwenza umbane.
Yintoni indlu encinci? Indlu encinci ayisiyo into enenkcazo engqongqo, njengoko intshukumo intsha. Ezi zindlu zihlelwa malunga ne-100 ukuya kwi-400 iinyawo zenyawo. Olu hlobo lwasekhaya luvunyelwe kuphela kwamanye amazwe afana neColorado, eFlorida, eMassachusetts, eMichigan, eNew York, e-Oregon, eTexas, njlnjl. Kwamanye amazwe eli khaya lincinci alizukuhlangabezana neekhowudi zokwakha okanye iimfuno zocando, jonga phambi kwakho Yakha. Ngobungakanani obuncinci, ezi ntlobo zamakhaya zihamba ngokulula.
Yintoni eyandisiweyo yokuThumela isiKhongo seNdlu?
Indlu yesikhongozeli sokuhambisa (i-AKA eyandisiweyo yeContainer House) (njengoko elo gama libonisa) isakhiwo esenziwe kwisitya sokuhambisa. Ezi zikhongozeli zinokuba ntsha okanye zisetyenziswe, kwaye zibonelela ngeendlela ezininzi zokuyila.
Izikhongozeli zokuhambisa zinokuba ziindidi ngeendidi zobukhulu obahlukeneyo, kodwa ezona zixhaphakileyo ziinyawo ezingama-20 x 8 iinyawo kunye neenyawo ezingama-40 x i-8 iinyawo. Olunye ukhetho (okunethe ngakumbi) kukukhetha ukuba isikhongozeli sandiswe-ngesiqhelo kwii-20 ezinyaweni ngeenyawo ezingama-40.
(Jonga le Ndlu yeSikhongozeli yokuhambisa inqanawa e IAmazon )
Ezi ntlobo zinokubekwa kwangaphambili ukuba awunakho ukuzakhela. Le yenye intshukumo / into entsha esentsha ke kungcono ukuba ujonge kwimimandla yendawo malunga nokwakha indlu yesikhongozeli sokuhambisa, uninzi lweekhowudi alunanto ibhaliweyo malunga neekhonsepthi ezinje ngale nto ke kungcono ukuxoxa nabacwangcisi bendawo.
Kutheni le nto abantu bekhetha izindlu ezincinci?
Ixabiso - Kule mihla nakwiminyaka yobudala yenye yezona zinto zibiza kakhulu onokuzithenga, kwaye sisidingo sabantu esisiseko. Uninzi lwabantu luchitha isiqingatha somvuzo wabo kwindawo yokuhlala, kwaye isizukulwana esitsha asinayo. Abaphumeleleyo kwikholeji banamatyala abafundi okuhlawula kwaye bagqibe kwelokuba bayile ekulondolozeni imali, kwaye nantsi indawo abenza kuyo, behlala encinci emzimbeni, kodwa bebanzi kweminye imiba.
Ukuthenga indlu yosapho olunye kuya kuxabisa malunga ne-250,000- $ 300,000 (kuxhomekeke kubungakanani, indawo, umgangatho, njl.njl) ngaphandle kokujonga inzala, ulungiso, iirhafu kunye neinshurensi oya kuyidinga. Indlu encinci, kwelinye icala, iya kuxabisa malunga ne- $ 10,000- $ 40,000 (Kwakhona, kuxhomekeke kubungakanani, indawo, umgangatho, njl. Njl.) Ngexabiso eliphantsi lokugcina, ukuqeshisa umhlaba, kunye neinshurensi. Lo ngumahluko omkhulu kakhulu kwixabiso elinokuthi lenze impembelelo enkulu kwinto enye onokuyifumana.
Ubuncinci - Enye intshukumo ekhulayo yincinci kwaye indlu encinci iyayichaza intsingiselo yayo. Umbono wendlu encinci kukuba nezinto oyifunayo ngokwenene. Akukho gumbi lokuhlambela lindwendwe kunye negumbi lokulala ekungekho mntu uya kulisebenzisa. Akukho zibhantshi zelineni zine oza kuzizalisa ngeetawuli ezingama-30 xa ungeke ukwazi ukusebenzisa ezo zininzi.
Ukuphila encinci kwaye unakho ngokwamandla akho kulungile, nokuba kulungile, ngaphandle kwendawo eyongezelelweyo abantu abaziva isidingo sokuyigcwalisa ngezinto ezingaphezulu.
Kutheni le nto abantu bekhetha ukuhambisa izindlu zesikhongozeli?
Ixabiso - Ukuba ixabiso lilungile, abantu baya kuthenga! Phambili, kuya kubakho iindleko ezininzi zokonga xa kuthelekiswa nesakhiwo sezitena nodaka. Oku kuya kuxhomekeka kwindawo, ubungakanani kunye nomgangatho. Ezinye zezona zindlu zitshiphu zenzelwe amaxabiso aphantsi njenge- $ 20,000. Ngale nto ithethwayo, ukuba uyila, inokubiza ixabiso eliphakamileyo njenge- $ 202,000. Ke ngoko, akufani noku kufuneka kubonakale ngathi ziiprojekthi ezingabizi kakhulu, okanye njengendlu yomthi womntwana emva kwendlu. Uya kufumana oko uhlawulayo kwaye usebenze. Oko bekutshiwo, kukho ukhetho lokuthenga ezi zinto zenziwe kwangaphambili, eziza kongeza umahluko kwithegi yamaxabiso.
Eco-friendly -Enye yeenjongo ezinkulu kuzo zombini ezi ntshukumo zikhankanyiweyo kukunceda ukugcina imeko-bume, okanye ubuncinci wenze umonakalo omncinci kangangoko. Ukhetho lokusebenzisa ukugcinwa ngokutsha kwezinto ezigcinwe zodwa luya kusindisa amawaka eepawundi zentsimbi (kwaye kukho intabalala yezikhongozeli zokugcina ezishiyiweyo njengangoku). Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa endaweni yokuhlala kwisakhiwo esizinyawo ezingama-3,000 esisebenzisa amandla ukufudumeza okanye ukupholisa imini yonke, yonke imihla ungabambelela kwisithuba esincinci kakhulu esibambe kuphela izinto eziyimfuneko.
Ngeqondo lokusebenzisa elisezantsi, ikwenza ukuba kube nakho ukubanakho ukufaka iiphaneli zelanga ezinokudala amandla afunekayo ukuze afudumeze amanzi nombane. Olu lukhetho olunamaxabiso ngaphambili, kodwa oko kuthetha ukuba akukho mali iyilwayo kwixa elizayo, kwaye ekugqibeleni izakuzihlawulela!
Ukufumana ezinye izimvo ndwendwela eli phepha ukubona igalari yethu uyilo oluncinci lwendlu .
ubukhulu bomnyango ngaphakathi
ukuba uthini kwi-toast yomtshato
bangaphi abafazi donald trump
ilokhwe ebomvu epinki ende
iring yantoni eya emtshatweni
Umndilili weminyaka abafazi bayatshata